Silicone rabha - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
Silicone rabha chinhu rabha ane cheni huru rinoumbwa nesilicon uye okisijeni maatomu rave, uye pane kazhinji mapoka maviri Organic zvakabatana nesilicon maatomu. Rine zvakanaka pasi tembiricha nemishonga uye vanogona kushanda pa -55 ℃.
Kune nzira dzakawanda classifying silicone rabha. Maererano chimiro pamberi achirapa, rinogona kukamurwa Room tembiricha vulcanized silicone rabha, mukuru tembiricha vulcanized silicone rabha. Maererano monomer kushandiswa, unogona kukamurwa methyl raive nebutiro silicone rabha, methyl phenyl raive nebutiro silicone rabha, fluorosilicone, nitrile silicone rabha uye zvichingodaro. Uye maererano kusiyana kuita uye kushandiswa, chinogona rakakamurwa vakawanda mhando, nakisa yakaderera tembiricha nemishonga mhando, nakisa yakakwirira tembiricha nemishonga mhando, mukuru simba mhando, mafuta nemishonga mhando, zvokurapa mhando uye zvichingodaro.
Vanokurudzira midziyo yezvizorwa kugadzirwa: LXQLF Series Multi-basa Triple mugodhi chisanganiso, LXQLFQ Series Enhanced Multi-basa Triple mugodhi chisanganiso, LXXJB yaitevedzana yemapuraneti chisanganiso, LXDLH Series yemapuraneti simba chisanganiso,